10 Dugsi oo Bixinaya Shahaadada Kalkaalisada 2 sano ee Filibiin 2022
10 Dugsi oo Bixinaya Shahaadada Kalkaalisada 2 sano ee Filibiin
Ku sii wadida waxbarashadaada cilmiga caafimaadka waxay noqon kartaa mid aad u faa'iido badan, fiiri iskuulada bixiya shahaadada kalkaalinta 2 sano ee Filibiin ee looga hadlay maqaalkan.
Shahaadada Master -ka ayaa ah tan ugu caansan 2 sano oo dadka badankiisna ay iloobaan darajada la -shaqeeyuhu taas oo si siman u qaadata 2 sano in la dhammaystiro.
Wadamada sida Mareykanka oo kale, halkaas oo ay ku yaalliin kulliyado badan oo bulshada ah oo bixiya tababar gacmeed, waxaad ka heli kartaa wax badan oo ah shahaadadan la-hawlgalayaasha. Waxay qaadataa 2 sano oo keliya inay dhammaystirto laakiin waxay kugu hormarineysaa xirfadda aad u baahan tahay si aad ugu fiicnaato goobtaas gaarka ah.
Shahaadada la -shaqeeynta ma ahan mid caan ka ah dalal badan, oo ay ku jiraan Filibiin, laakiin shahaadada mastarka aad bay caan uga tahay waddamada adduunka oo dhan.
Shahaadada Master -ka waxay dabooshaa dhinacyo badan oo kala duwan sida bachelor -ka laakiin si ka duwan kan dambe, shahaadada Master -ka waxay ku siin doontaa aqoon horumarsan waxayna ku qalabayn doontaa xirfado aad u ballaaran oo ku saabsan xiisahaaga.
Si aad u sii wadato shahaadada mastarka, shardiga guud waa in codsadayaashu ay dhammaystireen ama sannadka ugu dambeeya ee dhammaystirka barnaamijka shahaadada koowaad ee jaamacadda si ay ugu qalmaan arjiga shahaadada mastarka.
Waxaa laga yaabaa inay ku xiiso geliso inaad ogaato inaan dhowaan daabacay maqaal ku saabsan shahaadada masterka oo aan lahayn bachelor, isagoo sharraxaya tillaabooyinka lagu qaadanayo sidii loo sii wadan lahaa shahaadada mastarka adigoon lahayn shuruudda guud oo ah bachelor -ka sidoo kale waxay ka hadlaysaa iskuulada kala duwan ee aad ku baran karto Master -ka bilaa shahaadada.
Si kastaba ha noqotee, Filibiin, ma samayn kartid sayidyo adigoon marka hore dhammayn waxbarashada bachelor -ka. Kahor intaadan dalban shahaadada kalkaalinta 2 sano ee Filibiin, waa inaad dhammaystirtay shahaadada koowaad ee kalkaalinta ama goob laxiriira oo kujirta caafimaadka iyo daryeelka caafimaadka.
MS ee Kalkaalisada, oo sida caadiga ah loogu yeero (MS-N) ee Filibiin, waa shahaadada qalin-jabinta 2 sano oo hagaajinaysa aqoonta iyo xirfadaha kalkaalinta kalkaalinta falanqaynta iyo hirgelinta, iyo sidoo kale barista, cilmi baarista, iyo adeegga bulshada.
Ujeeddada barnaamijka ayaa ah in la horumariyo xirfadlayaal leh aqoon sare oo ku aaddan diiradda ay doorteen, iyo sidoo kale tababar caafimaad iyo khibrad maamul.
In kasta oo shakhsiyaadka qaarkood ay u dejiyaan Bachelor -ka Kalkaalisada kuwa kale ma sameeyaan, laakiin taa beddelkeeda way sii socdaan si ay u daba -galaan oo u horumariyaan kartidooda iyo aqoontooda berrinka.
Tagitaanka barnaamijka sayidku wuxuu la yimaadaa faa'iidooyin badan oo ay ka mid tahay in shaqsiga haysta shahaadada mastarka ay aad u jeclaan doonaan shaqaaluhu marka la barbar dhigo shaqsiyaadka haysta shahaadada bachelorka.
Qofka haysta shahaadada masterka ee kalkaalisada wuxuu qaataa mushahar ka sarreeya, wuxuu maamulaa waaxda, aad ayaana looga qaddariyaa kan aan lahayn.
Helitaanka shahaadada mastarka ee kalkaalisada gebi ahaanba waa doorashadaada adigana adigaa iska leh inaad go'aansato. Shahaadada kalkaalinta 2 sano ee Filibiin ee looga hadlay maqaalkan waxaa loogu talagalay kuwa doonaya inay sii wataan waxbarashadooda oo ay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyinka ka imanaya noqoshada shahaadada mastarka.
Iyada oo aan la sii dheereyn, aan ka wada hadalno iskuulada bixiya shahaadada kalkaalinta 2 sano ee Filibiin.
2 -sano Shahaadada Kalkaalinta Caafimaadka ee Filibiin
1. Jaamacadda Filibiin ee Jaamacadda Furan
2. Jaamacadda Filibiin, Manila
3. Jaamacadda Haweenka ee Filibiin
4. Jaamacadda Bariga Ramon Magsaysay (UERM)
5. Jaamacadda Adventist ee Filibiin
6. Jaamacadda Saint Louis
7. Machadka Sayniska Caafimaadka iyo Caafimaadka De La Salle
8. Jaamacadda Masiixiyiinta ee Filibiin
9. Jaamacadda Western Mindanao State
10. Jaamacadda Gobolka Palawan
Iskuulada bixiya shahaadada kalkaalinta 2 sano ee Filibiin waa:
Jaamacadda Filibiin ee Jaamacadda Furan
Jaamacadda Filibiin, Manila
Jaamacadda Haweenka Filibiin
Jaamacadda Bariga Ramon Magsaysay (UERM)
Jaamacadda Adventist ee Filibiin
Jaamacadda Saint Louis
Machadka Sayniska Caafimaadka iyo Caafimaadka De La Salle
Jaamacadda Christian Philippine
Jaamacadda Western Mindanao State
Jaamacadda Gobolka Palawan
Jaamacadda Filibiin, iyada oo loo marayo Kuliyadda Maareynta iyo Daraasadaha Horumarinta, waxay bixisaa Master of Arts ee Kalkaalisada iyo mid ka mid ah shahaadada kalkaalinta 2 sano ee Filibiin.
Kalkaaliyayaasha caafimaadka ee Filibiin iyo dibedda ayaa ka faa'iideysan kara barnaamijkan oo bixiya waxbarasho tayo sare leh oo la heli karo, la heli karo, oo raqiis ah.
Waxay fursad u tahay kalkaaliyayaasha waqtiga buuxa ee aan awoodin inay ka tagaan shaqooyinkooda ama qoysaskooda si ay u qaataan shahaadada qalin-jabinta kadib.
Waxay bixisaa barnaamij dabacsan oo daboolaya baahidooda xagga waqtiga, helitaanka, iyo danaha. Ardaydu waxay dooran karaan afar dariiq oo waaweyn: kalkaalisada caafimaadka dadka waaweyn, kalkaalinta ilmaha hooyada, maamulka kalkaalinta, iyo gerontology, iyo kalkaalinta waayeelka.
Jaamacadda Filibiin, Manila waa mid ka mid ah iskuulada bixiya shahaadada kalkaalinta 2-sano ee Filibiin.
Shahaadada kalkaalinta ee 2-sano ah waa barnaamij Master ah oo laga bixiyo Kulliyadda Kalkaalisada ee jaamacadda, oo ah dugsiga kalkaalisada ugu sharafta badan dalka, wax ka qabashada baahiyaha caafimaad ee dadka Filibiin iyadoo la siinayo hoggaan iyo tayo koritaanka kalkaalinta bulshada caalamka.
Barnaamijka sayidka ee ujeedka ugu weyn ee kalkaalintu waa inuu u qalabeeyo kalkaaliyaal caafimaad oo u qalma takhasuska caafimaad iyo doorka hoggaamineed ee mid kasta oo ka mid ah qaybaha muhiimka ah ee hoos ku taxan:
Kalkaalisada caafimaadka dadka waaweyn
Kalkaalisada caafimaadka bulshada
Daryeelka hooyada iyo dhallaanka
Caafimaadka maskaxda iyo kalkaalinta maskaxda
Kalkaalisada caafimaadka dugsiga
Kulliyadda Kalkaalisadu waxay bixisaa Master of Arts (MA) ee Kalkaalisada taas oo u baahan dhammaystirka 36 cutub, 30 cutub oo lagu xisaabiyo koorsooyinka tacliinta, iyo 6 cutub oo loogu talagalay qoraalka.
Dugsiga Kalkaalisada ee Jaamacadda Haweenka Filibiin waa mid ka mid ah dugsiyada bixiya 2 sano shahaadooyinka kalkaalinta Filibiin.
Kulliyadda Kalkaalinta ee PWU waxaa la aasaasay 1960 waxaana markii ugu horreysay lagu bilaabay bixinta manhaj isku dhafan oo shan sano ah oo horseed u ah Bachelor of Science in Nursing (BSN), waxyar kadib, Master of Arts ee Kalkaalisada iyo Dhakhtarka Falsafadda ee Kalkaalinta galay kulliyadda.
Master of Arts ee Kalkaalisada, oo qaadata 2 sano in la dhammaystiro ayaa sidoo kale bixisa takhasus 5 qaybood oo kala duwan. Beerahaani waa Master of Arts ee Kalkaalisada:
Takhasuska Maamulka iyo Maaraynta
Takhasuska caafimaad ee Caafimaadka-Qalliinka
Takhasuska caafimaad ee Kalkaalisada Caafimaadka Bulshada
Takhasuska caafimaad ee Kalkaalisada Maskaxda iyo Maskaxda iyo
Takhasuska caafimaad ee Kalkaalisada Hooyada iyo Dhallaanka
Jaamacadda Bariga Ramon Magsaysay Memorial Medical Center Graduate School Graduate School waa mid ka mid ah dugsiyada bixiya shahaadada kalkaalinta 2 sano ee Filibiin.
Dugsiga Qalinjebinta UERMMMC wuxuu qiyaasayaa jawi waxbarasho oo kobcinaya tacliinta sare ee cilmiga caafimaadka, halkaas oo dadku had iyo jeer si xor ah oo wax -ku -ool ah u hadlaan, isku kobciyaan fikradaha midba midka kale iyo u tarjumidda fikradahaas si aad u wanaagsan.
Iyada oo hadafkeedu yahay in la horumariyo mufakiriinta muhiimka ah ee cilmiga caafimaadka kuwaas oo saamayn ku yeelan kara isbeddelka bulshada ee tayada nolosha sare. Iyada oo loo marayo hawlgal caafimaad oo horumarsan, dadaallada sayniska, iyo waxqabadyada horumarinta bulshada, barnaamijkan shahaadadda waxaa loogu talagalay in lagu tababaro kalkaaliyayaal xirfadlayaal ah oo ku takhasusay kala duwan iyo door hoggaamineed.
Iskuulku wuxuu bixiyaa Master of Science ee Kalkaalisada (MSN) iyo Master of Arts in Nursing (MAN)
Kulliyadda Kalkaalisada ee Jaamacadda Adventist ee Filibiin waxay bixisaa barnaamijyo shahaadada koowaad iyo kuwa qalin -jabinta ah oo ka jira kalkaalinta.
In kasta oo barnaamijka bachelor -ka uu qaadanayo afar sano in la dhammaystiro, barnaamijka sayidku wuxuu qaataa laba sano oo keliya si loo dhammaystiro. Tani waxay ka dhigaysaa Master of Science ee Kalkaalisada Jaamacadda Adventist ee Filibiin mid ka mid ah shahaadada kalkaalinta 2-sano ee Filibiin.
Master of Science ee Kalkaalisada iyo Master -ka barnaamijyada kalkaalinta waxaa bixiya waaxda qalin -jabinta ee kulliyadda. Kuwii hore ee kalkaalisada caafimaadka dadka waawayn iyo kalkaalinta caafimaadka qoyska, labaduba waxay la socdeen barnaamijka falsafadda halka kan dambe labaduba ay yihiin barnaamij laakiin aan ahayn barnaamij tafsiir.
Waxaad hubin kartaa sharraxaadda koorsada oo dooran kartaa barnaamijka adiga kugu habboon adiga oo raacaya isku -xirka hoose.
Jaamacadda Saint Louis waa mid ka mid ah iskuulada bixiya shahaadada kalkaalinta 2-sano ee Filibiin. Shahaadada kalkaalinta ee machadkan waxay bixisaa Master of Science ee Kalkaalisada oo qaadata 2 sano in la dhammaystiro. Barnaamijku wuxuu ka kooban yahay afar 12 cutub oo ah koorsooyinka aasaasiga ah, shan 12 cutub oo waaweyn, iyo laba qoraal qoraal ah.
Jaamacaddu waxay sidoo kale xiriir la leedahay isbitaal wax lagu baro si loo tababaro kalkaaliyayaal caafimaad qaba oo lagu qalabeeyo xirfado iyo aqoon si ay u noqdaan hoggaamiyeyaal caalami ah oo ku sugan dhinacyadooda.
Tani waa mid ka mid ah meelaha aad ka heli karto shahaadada kalkaalinta 2 sano ee Filibiin. Machadku wuxuu u fidiyaa Master of Arts ee Kalkaalisada (MAN) ardayda dhammaan qaybaha nolosha. Barnaamijku wuxuu tababaraa kalkaaliyaal caafimaad oo u qalma ku -takhasuska kalkaalinta, hoggaaminta, iyo cilmi -baarista mid ka mid ah koorsooyinka hoose ee hoos ku taxan:
Kalkaalisada Hooyada iyo Dhallaanka
Wadarta 42 unug ayaa looga baahan yahay shahaadada MAN, oo ay ku jiraan 15 cutub oo loogu talagalay koorsooyinka aasaasiga ah, 12 cutub oo koorsooyin waaweyn ah, 6 cutub oo koorsooyin xulasho ah, 3 cutub oo seminaar qoraal ah, iyo 6 cutub oo qoraal qoraal ah.
Ardayga buuxa ee MA wuxuu qaadan karaa ilaa 9 cutub semester kasta waxaana la filayaa inuu ku dhammeeyo 42 cutub muddo toddobo sano ah (oo ay ku jiraan 5 sano oo bachelor ah), oo ay ku jiraan imtixaanno dhammaystiran, imtixaanno, iyo qoraal qoraal ah.
Kulliyadda Kalkaalinta Caafimaadka iyo Isbahaysiga Caafimaadka ee Jaamacadda Masiixiyiinta ee Filibiin waxay bixisaa barnaamijyo caafimaad oo badan oo ay ka mid yihiin kalkaalinta bachelor -ka iyo heerarka sayidyada waxbarasho.
Barnaamijka bachelor-ka wuxuu qaataa 4-5 sano ee caadiga ah si loo dhammaystiro halka sayidyadu ay qaataan 2 sano inay dhammaystiraan, taasoo ka dhigaysa machadka mid ka mid ah meelaha aad ka heli karto shahaadada kalkaalinta 2 sano ee Filibiin.
Kuliyada Kalkaalinta Caafimaadka iyo Isbahaysiga Caafimaadka waxay bixisaa barnaamijka Master of Arts in Nursing (MAN). Cilmiga kalkaalisada, fikradaha, iyo aragtiyaha ka soo jeeda maaddooyinka ku dhow, iyo sidoo kale ku -dhaqanka, cilmi -baarista, maareynta, iyo maamulka, ayaa dhammaantood lagu daray manhajka.
Barnaamijka Master of Arts ee kalkaalinta caafimaadku wuxuu doonayaa inuu kobciyo hoggaamiyeyaasha kalkaalinta xirfadleyda ah iyo dhakhaatiirta kartida u leh Filibiin caafimaad qaba.
Raadinta halka laga helo shahaadada kalkaalinta 2 sano ee Filibiin? Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad fursaddan u isticmaasho si aad u eegto barnaamijka Master -ka ee Kalkaalinta oo ay bixiso Kulliyadda Kalkaalinta ee Jaamacadda Mindanao Galbeed.
Ujeeddooyinka barnaamijku waa inay bixiyaan aqoon sare, xirfad, karti anshaxeed oo ku aaddan dhinaca takhasuska.
Waxaa sidoo kale looga golleeyahay horumarinta dhaqanka kalkaalinta, dhiirri-gelinta adeegsiga cilmi-baarista iyo aqoonta ku saleysan cilmi-baarista, muujinta hoggaaminta kalkaalisada iyo xirfadaha maareynta ee duruufo kala duwan, iyo inay awood u leedahay baaritaanka caafimaadka hadda jira iyo siyaasadaha la xiriira caafimaadka si loo dejiyo xalka hagaajinta daryeelka caafimaadka gaarsiinta.
Master-ka Kalkaalisada waa barnaamij qalin-jabis ah oo ka kooban 36 cutub oo aan lagu bixin takhasuska soo socda ee Kalkaalisada Caafimaadka-qalliinka, Kalkaalisada Caafimaadka Hooyada iyo Dhallaanka, Kalkaalisada Maskaxda, iyo Kalkaalisada Caafimaadka Bulshada.
Jaamacadda Gobolka Palawan, waxaad ka heli kartaa shahaadada kalkaalinta 2 sano ee Filibiin haddii aad tahay arday caalami ah ama mid gudaha ah, ilaa aad haysato shuruudaha oo aad diyaar u tahay inaad u qaaddo xirfadahaaga kalkaalinta iyo ku -celcelinta heerka xiga.
Kuleejka Kalkaalinta Caafimaadka iyo Sayniska Caafimaadka ee Jaamacadda Gobolka Palawan ayaa mas'uul ka ah bixinta koorsooyinka waxayna baraa horseed u noqoshada shahaadada kalkaalinta 2 sano ee Filibiin.
Haddii aad rabto inaad ku qalabeysato xirfadaha maareynta ama aad kordhiso kartidaada kalkaalinta, barnaamijkan ayaa adiga kugu habboon.
Kuwani waa liistada iskuulada bixiya shahaadada kalkaalinta 2 sano ee Filibiin taas oo aan rajeynayo inay wax weyn kaa tari doonto.
Si aan kuu sii caawiyo, waxaan hoos ku taxay shuruudaha gelitaanka guud si aan u galo shahaadada kalkaalinta 2 sano ee Filibiin ama sayid barnaamijka kalkaalinta ee Filibiin.
Codsaduhu waa inuu haystaa shahaadada bachelor -ka ee kalkaalinta, tusaale ahaan Kalkaalisada BS, ama uu haysto shahaadada koowaad ee ku habboon barnaamijka. Codsadaha haysta shahaado aan waafaqsanayn daryeelka caafimaadka iyo caafimaadka ayaa laga yaabaa in weli loo ogolaado barnaamijka ilaa inta ay qaadanayaan koorsooyinkii hore loogu baahnaa. Si kastaba ha ahaatee, kulliyadaha iyo jaamacadaha qaarkood ayaa qirta dadka haysta shahaadada bachelorka.
Codsaduhu waa inuu ku aflaxaa Imtixaanka Ogolaanshaha Qalinjabinta ee jaamacadda
Foomka dalabka waa in si habboon loo dhammaystiraa oo loo gudbiyaa Xafiiska Diiwaanhayaha Jaamacadda, oo ay la socdaan dukumentiyada soo socda:
Nuqulkii asalka ahaa ee qoraalka rasmiga ah ee diiwaanka tacliinta (asalka iyo koobiga) oo sheegaya shahaadada la helay, taariikhda qalin -jabinta, iyo Amarka Gaarka ah ee Xafiiska Dugsiyada Gaarka ah (SOB Maya).
Laba warqadood oo tixraac ah oo ka socda macalimiintii hore, hormuudka, asxaabta, ama kormeerayaasha, iyagoo adeegsanaya qaabka caadiga ah ee UPOU.
Rasiidka rasmiga ah ee khidmadda dalabka ee lagu bixiyo laan kasta oo Bangiga Qaranka Filibiin (PNB).
Diiwaanka caafimaadka iyo ilkaha ee ugu dambeeyay
Nuqul ka mid ah NSO Shahaadada dhalashada la xaqiijiyay
Nuqul ka haysta shahaadada jaamacadeed
2 × 2 Sawirka Aqoonsiga
Kuwani waa shuruudaha gelitaanka guud si loogu sii wado shahaadada kalkaalinta qalin -jabinta ee machad kasta.
Qofka ka qalin jabiyay MS ee Kalkaalisada waa inuu ku aflaxaa Imtixaanka Shatiga Kalkaaliyaha si uu u noqdo Kalkaaliye Diiwaangashan ee Filibiin. Guddiga Xeerarka Xirfadlaha ayaa kormeera imtixaanka, kaas oo ay maamulaan Guddiga Kalkaalisada (PRC).
Xaqiiqooyin ku saabsan Jaamacadda Filibiin Kuliyada Caafimaadka
15ka ugu sarreeya Iskuulada Caafimaadka ee Filibiin
Iskuulada Caafimaadka ee ugu Fiican Texas Faahfaahintooda
Barashada Hagaha Dibadda Jaamacadaha Aasiya
Previous Post:Xaqiiqooyin ku saabsan Jaamacadda Filibiin Kuliyada Caafimaadka
Ekong wuxuu leeyahay,
January 31, 2022 at 1: 24 pm
Ma jiraan wax deeqo waxbarasho ah oo goobtan ah ii soo sheeg.. mahadsanid
Emmanuel wuxuu leeyahay,
January 17, 2022 at 6: am 59
Wixii deeq waxbarasho ah oo gudaha dalka ah fadlan ka jawaab
ange wuxuu leeyahay,
January 12, 2022 at 3: 06 pm
Waxaan jecelnahay inaan aragno arday badan oo ka qalin-jabiyey kalkaalisada waddankeena!